हिंसाको पाठशाला बन्दै, समाज « Anumodan National Daily
हिंसाको पाठशाला बन्दै, समाज
प्रकाशित मिति : २५ श्रावण २०७५, शुक्रबार ०३:०२
आजभोलि दैनिकजसो हत्या, बलात्कार, बलात्कारपश्चात हत्या, अपहरण जस्ता हिंसाका घटना दोहोरिरहेका छन् । हिंसा कसैको उपज नभई समाजबाट उत्पन्न एक किसिमको विकृत अवस्था हो । हिंसा उत्पादनको कारखाना पनि समाजमा नै छ । हिंसा बिनाको समाज अब कल्पना बाहिरको कुुरा भइसक्यो ।
हिंसा विरुद्ध समाजमा नैतिकता शिक्षण गर्ने पाठशाला, धार्मिक प्रवचन, मण्डली, चर्च र ओमकार मिसन पनि क्रियाशील छन् । समाजमा अन्याय, अत्याचार हुुन्छ । हिंसा हुुन्छ भनेर संसारभरि जेल, अदालत र प्रहरी कल्पना भएको हो । रामराज्य भनेको सुुसंस्कृत राज्य पनि एक जना नारी अपहरणपछि भएको हिंसा त्यसपछि एकएक जना नारीले गरेको अग्नीपरीक्षण पनि हिंसाबाटै प्रेरित थियो ।
समाजमा जति शिक्षित संख्या बढेसँगै हिंसा, हत्या, बलात्कार, अपहरण संख्यामा कमि आउनुु पर्ने हो, तर विगतभन्दा बढिरहेको छ । समाज अहिले हिंसाको पाठशालामा रूपान्तरण भइरहेको छ । एक जनाले हत्या गर्‍यो कसैलाई भने समाजमा एक से एक “हत्यारालाई फाँसी देऊ” भन्ने जमात तयार हुुन्छ । त्यसभित्र लुुकेको हिंसा त्यति धेरै क्रूर भावना कसले उत्पन्न गर्‍यो, ती मानिसमा । त्यो भिडमा अर्का मान्छे फेरि ज्यान लिने संस्कार भाव पैदा कसरी उत्पन्न भयो ?
अहिले समाजका सुुशिक्षित भनेकाहरू पनि समाजमा “बलात्कारीलाई फाँसी दे, हत्यारालाई फाँसी दे” भन्दै सडकमा कुुर्लिनेदेखि सदनसम्म माग गर्ने पंक्ति कम छैन । एक मान्छे मरेकोमा दुु:ख र अर्काे भलै मान्छे अपराधी भए पनि मान्छे मार्ने कुुरा कसरी दिमागमा उत्पन्न भयो ? अपराध मनोवृत्ति तत्त्व वा भावनाको विकास केवल आवेग हो वा समाजको उपज हो ? पीडित प्रतिको सहानुुभूुति मात्र हो वा मनोभावना नै अपराध प्रेरित हो । त्यस्ता हिंसा मनोभावना भएकाहरूले थप अपराधको संख्या समाजमा त्यही मान्छेले गर्ने हुन् । अपराध हिंसा सानो होस् ठूलो होस्, हिंसा हिंसा नै हो । भलै परिणामको भार सानो होस् वा ठूलो । अपराधीलाई फाँसी दे भन्नेहरू सेता बस्त्र लगाएर सडकमा आए पनि उनीहरूमा पनि अपराध घटाउने मनोबलभित्र लुकेको छ । जसले समाजमा हिंसाको पाठ सडकबाटै चिच्चाएर सिकाउँदैछन् । उनीहरूमा पनि त्यसले गर्‍यो, म पनि त्यही गर्छु भन्ने पाठशालाका विद्यार्थी हुन् । हिंसा वा युुद्धको व्यापार क्षणिकमा नाफाको हकदार एकजना व्यापारी भए पनि कालान्तरमा घाटा परिणाम सबैले सहनुपर्ने हुुन्छ ।
फाँसी दिने देशमा पनि हिंसा कम भएका छैनन् । संसारमा आत्मघाती बम विस्फोटन गर्ने शृंखला पनि फाँसीको माग गर्ने देशमा नै विकास भएको छ । हिंसाले हिंसा नै जन्माउँछ । सुंगुरले जन्माउने बच्चा सुंगुर नै हुुन्छ । कुखुराले जन्माउने चल्ला नै हो । त्यसैगरी हिंसाले जन्माउने हिंसा नै हो । आज अरब मुलुक सिरिया, इराक, अफगानिस्तानमा, छिमेकी मुलुक भारत, पाकिस्तान र छिमेकी मुलुक चिनमा पनि फाँसी दिने कानुनी व्यवस्था छ । के ती मुलुकमा हिंसासून्य नै छ ? किनकि, हिंसाले जन्माउने अन्तिम परिणाम हिंसा नै हो । जस्तै बकाईनो रुखमा सुन्तलाको आशा समाजले गर्नै सक्दैन ।
१० वर्षे जनयुद्धको नाममा मान्छेको टाउको काटेर परिवर्तन हुन्छ भन्ने द्वन्द्वकालीन हिंसाको विजारोपण समाजमा बढेको छ । समाजमा बदलाव भन्दा पनि समाजमा बदलाको भावना जागृत भएको छ ।
गान्धी र बुुद्ध जन्मेको भूमिमा नागरिक कसरी यतिसम्म हिंसामा रमाउन सक्छन् ? समाजमा क्रूरता, अमानवियताको पराकाष्ठा नै नाघेको हो ? गान्धी र गौतम बुुद्धको विचार सत्मार्ग आज केवल तिनका शिष्यले याद गर्ने श्लोक मात्र भएका छन् । ॐ शान्तिको नारा लगाउने केवल ती सफेद बस्त्रधारीका लागि मात्र हो ? कसरी समाजमा आत्मघाती विचार भएका मानिसको जमात तयार भयो ? एक जना महिला र पुुरुष आपत्तिमा भेटेको भन्दै श्रीमानले ज्यान लिएर मार्‍यो भने समाजमा स्यावासी दिने लाइन लाग्छ । एकपल्ट विचार गर्ने हो भने ज्यान लिने बहादुर नै होलान्, तर आपत्तिमा भेटिएका भन्दा ज्यान लिनेको अपराधको मनोदशा अझ बढि अपराध प्रेरित देखिन्छ । ती मान्छेभित्र उत्पन्न विचार र भावना नै समाजमा विचारको प्रतिनिधित्व गर्छ । समाजमा बढेको हिंसा विचारले नै समाजमा सानो अपराध गरे पनि मान्छे ज्यान लिने त्योभन्दा खतरनाक अपराधिक कार्य गर्ने उद्यत भएको पाइन्छ ।
गएको चार वर्षमा नेपालमा प्रहरी इन्काउन्टरमा अपराधी भनिएका गुडा नाइकेलाई प्रहरीले इन्काउन्टर गरी ज्यान लियो । प्रहरीलाई स्यावासी दिने संख्या ठूलो जमात तयार भयो । मान्छेको जीवन हरण गर्न नदिने, मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षाका लागि खुलेको निकाय लोकलालच र लोकदवावका कारण एक शब्द समेत बोल्ने हिम्मत गरेनन् । किनकि, भोलि समाजले उनीहरूलाई अपराधीको विल्ला लगाई दिने डर थियो वा उनीहरू पनि अपराध मनोवृत्ति बदलाव भावनाबाट जागृत थिए, त्यो उनैले जानुन् । नागरिक रक्षाको कवज प्रहरीले इनकाउन्टरमा मारेपछि प्रहरीमा स्यावासी दिनेको संख्या बढ्यो । प्रहरीलाई त्यसमा थप मलजल पुगेको छ । प्रहरीले अपराधी पक्राउ गर्ने र अपराधको पृष्टि गर्ने झन्झट घटाउन इन्काउन्टर गरी काम चाँडै सम्पन्न भयो । यदि न्यायिक प्रक्रिया र विधिको शासनलाई लत्याएर समाजले प्रहरीलाई स्यावासी दिने हो भने भोलि प्रहरीबाटै पैसा लिएर फिरौति रकममा अपराधी निर्मुल पार्ने, बढुवा हुुने प्रलोभनमा भोलि निर्दाेषमाथि ज्यान लिने प्रहरीको शृंखला बढ्यो भने यसको समाजमा कस्तो असर पर्ला ? प्रहरीमा काम गर्ने मान्छे नै हुन्, किनकि कतिपय चोरीका घटनामा प्रहरी समेत संलग्न भएका पनि सार्वजनिक भएका छन् ।
नेपालमा द्वन्द्वकालमा यस्तै इनकाउन्टर धेरै भएका थिए । चार वर्षमा इन्काउन्टरमा सात जना गुन्डा मारिए । के समाजमा अपहरणकर्ता, जाली, फटाह सकिएका हुन् ? के अपराध गर्नेको संख्या घटेका छ ? इनकाउन्टरमा मर्नेको उपस्थिति मात्र घटेको छ, तर अपराधमा प्रत्येक वर्षको आँकडा बढेकै छ । प्रहरीकै तथ्यांकको मात्र अध्ययन गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७०/२०७१ मा प्रहरीमा दर्ता भएका अपराध संख्या २७३८६, आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा २८०७० पुग्यो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा त्यो संख्या बढेर २८५६३ पुुगेको छ । भने आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ३१४६२ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो संख्या ३४ हजार बढि पुग्ने देखिन्छ ।
नेपालमा चलेको दश वर्षीय जनयुुद्धमा तत्कालीन माओवादीले समाजमा सामन्ती समुल अन्त्य गर्ने अभियान चाल्यो । मान्छेको टाउको रेट्यो । के समाजमा सामन्ति, अपराधी र लुटेरा अन्त्य भए ? समाजमा नकारात्मक द्वन्द्वको सिर्जना राज्यको व्यवहारले झन् मलजल गरेको छ । १० वर्षे जनयुद्धको नाममा मान्छेको टाउको काटेर परिवर्तन हुन्छ भन्ने द्वन्द्वकालीन हिंसाको विजारोपण समाजमा बढेको छ । समाजमा बदलाव भन्दा पनि समाजमा बदलाको भावना जागृत भएको छ ।
राज्यले असल आचरणका नाममा निष्कृष्ट अपराधी, कैदी छोड्ने परम्पराले पनि समाजमा हिंसा बढाइरहेको छ । २००७ सालदेखि विभिन्न राजनीतिक रंग दिएर समाजमा अपराधीहरूले उन्मुक्ती पाए । यसकारण पनि समाजमा हिंसाले जरा गाडेर बसेको छ । अपराधीलाई राज्यले उन्मुक्ती दिने कारण समाजमा हिंसाको विचार बढेको छ । किनकि, अपराध गरेको मान्छे जेल सजाय नहुनाले समाजबाट अपराध उन्मुलन गर्ने सोचले हिंसाको भावना पैदा गरेको छ । सानो कुरा लुकाउन समाजमा मान्छेले ठूला अपराध गर्ने समाजले मलजल गरेको छ । केही वर्षअघि काठमाडौंमा ५०० सय रुपैयाँ ऋण फिर्ता लिन एक समूहले एक जना साथीको ज्यान लियो । कञ्चनपुुरमा एक बालकले कानमा लगाएको सुन, हातमा लगाएको केही हजार रुपैयाँको बालाको लोभले बालकको हत्या भयो । श्रीमान वा श्रीमतिले अरूसँग यौन सम्बन्ध थाहा पाउने डरले श्रीमति वा श्रीमानको हत्या गरेका घटना पनि सार्वजनिक भएका छन् । श्रीमान श्रीमतिसँग चित्ता नबुझे सम्बन्ध विच्छेदको सरल उपचार खोज्नुभन्दा त्योभन्दा घातक परिणाम गरेर रमाउने अपराधिक मनोवृत्ति विकास भएको छ ।
दण्डहिनताले समाजमा हिंसा बढाइरहेको छ । जसले समाजमा द्वन्द्वको परिस्थिति पैदा गरेको छ । नकारात्मक राजनीतिक विभाजनका कारण पनि समाज हिंसाको पाठशाला बन्दै गएको छ । चुनाव जित्न घर, समाज, जाति, भाषा र भूगोलका बीचमा दूरी पैदा गरेका छन् । एकअर्का विरुद्धमा विष वमन गरेका छन् । आफ्नो पार्टीले गरेको सबै कार्य ठीक, अर्कोले गरेको कार्य दण्डनीय हुने जस्तो विचार भावनाका कारण समाजमा हिंसा विाजरोपण भएको छ । महिलाले पुरुष विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन् । एउटा जातिको संगठनले अर्काे जातिमाथि धावा बोलिरहेको छ । एक भूगोलका मान्छेले अर्को भूगोलको मान्छेलाई द्वन्द्वको कारण बनाउन उद्दत गरिरहेको छन् । विगतमा देशमा साक्षरता न्यून थियो पनि समाजमा मान्छेको ज्यान लिने गरी मान्छे संगठित हुँदैन थिए, तर शिक्षितको संख्या बढे पनि समाजमा निष्कृष्ट अपराधमा कमि आएको छैन ।
साउन २५ गते (epaper)